News - Gagasi World
UNgqongqoshe womnyango wezobuciko namasiko kulesifundazwe, uHlengiwe Mavimbela, usevule ngokusemthethweni umtapowolwazi wabantu abangaboni emehlweni esikoleni Ethembeni eNchanga entshonalanga yeTheku. Ukuvulwa kwale-Library kuyingxenye yemkhankaso yokubungaza inyanga yabantu abakhubazekile, neholwa nguhulumeni wesifundazwe. uMavimbela uthi ngalesenzo, balandela umyalelo kaMengameli, uCyril Ramaphosa, wokuthi akekho umfundi okufanele afike eminyakeni eyishumi engakwazi ukufunda nokubhala. Listen here: Content hosted by iono.fm By: Mfundo […]
Finance MEC, Ravi Pillay, has urged the community of UMgungundlovu district to ensure that they look after the equipment that has been handed over to them as part of Operation Khawuleza. Residents have benefited from a multi-million rand yellow plant equipment, which will help in making sure that the municipalities responds urgently to service delivery, […]
Abazali babafundi baseGeorgetown eMaritzburg, sebegasele emahhovisi enhloko yomnyango wezeMfundo kulelidolobha bekhala ngokuthi bafuna izimpendulo ngesinqumo somnyango sokumisa oyisekela likathishomkhulu waleskole. USimon Madlala, kulindeleke ukuthi ame ukusebenza ngoJanuary ngecala lokushaya umfundi wentombazane kulesikole. Listen here: Content hosted by iono.fm By: Nompendulo Ngubane
IIA SA: Public & private businesses have improved
NGO’s: Awuqale ekhaya u16 Days of Activism
Concerns continue regarding Eskom’s new CEO
Ramaphosa: Hiring Eskom CEO will restore stability
Umeya uthi umphakathi uzosizakala ngokushesha
Imiphakathi inxuswa ukuthi ubambe uqhaza ekunqandeni izigilamkhuba
Majodina: Law must take its course with Bongo
Abashayeli bayanxuswa ukuba bashayele ngokucophelela